मार्केटिंग सामग्री लेख्नका लागि5सुझावहरू जुन व्यवसाय मूल्य Martech Zone
बिहीबार, मे 11, 2017 ग्राहम रान्ड
बाध्यकारी मार्केटिंग प्रतिलिपि सिर्जना गर्न तपाईंको फ्यानहरूको लागि मूल्य प्रदान गर्न तल आउँदछ। यो रातोरात हुँदैन। वास्तवमा, मार्केटिंग सामग्री लेख्न जुन विविध दर्शकहरूको लागि अर्थपूर्ण र प्रभावशाली हुनेछ ठूलो कार्य हो। यी पाँच सुझावहरूले नयाँ नयाँ बच्चाहरूको लागि रणनीतिक सुरुवात बिन्दु प्रदान गर्दछ जबकि अधिक अनुभवी मानिसहरूलाई गहन ज्ञान प्रदान गर्दछ।
सुझाव # १: दिमागमा अन्त्यको साथ सुरू गर्नुहोस्
सफल मार्केटिंगको पहिलो सिद्धान्त एक दृष्टि हुनु हो। यो दृष्टि उत्पादन र सेवाहरू बेच्न पछाडि जानु पर्छ, सट्टामा ब्रान्डले विश्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा केन्द्रित।
यसलाई विशाल विश्व परिवर्तन गर्ने सामानहरू हुनु आवश्यक पर्दैन। उदाहरण को लागी, यदि एक कम्पनी साना बच्चाहरु को लागी शैक्षिक भिडियो गेम बेच्छ, उनीहरु लाई बजार मा कहीं पनि सबै भन्दा रमाईलो शैक्षिक खेलहरु प्रदान गर्ने एक दर्शन हुन सक्छ। यसले मार्केटिंग सामग्री लेख्न अनुवाद गर्न सक्दछ जुन त्यो लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ, उदाहरणका लागि हास्यास्पद सामग्री लेखेर जसले पाठकलाई केहि चाखलाग्दो कुरा सिकाउँदछ।
यदि यस कम्पनीले उनीहरूको श्रोता (वा उनीहरूका श्रोताका बच्चाहरू) लाई शिक्षा दिन र मनोरन्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने, बोरिंग ब्यापारिक विचारधाराको गद्य लेख्छ भने, तिनीहरू असफल हुन्छन्। दिमागमा अन्तबाट सुरु गरेर र एक दृष्टि राखेर, तिनीहरू यसको सट्टा एक सफल अभियानको लागि प्राइमिड हुन्छन्।
सुझाव # २: सबै मार्केटिंग प्रतिलिपिको लागि एक व्यक्तिको आवाज प्रयोग गर्नुहोस्
मार्केटिंग प्रतिलिपि भनेको व्यापारले आफ्ना ग्राहकहरूसँग प्रत्यक्ष बोल्ने केही अवसरहरू मध्ये एक हो। त्यस्तै समितिले मार्केटि avoid गर्नबाट जोगिन यो महत्वपूर्ण छ। यदि दस फरक व्यक्तिले मार्केटिंग प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्नु अघि त्यसलाई अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ भने, राम्रो सामग्री सिर्जना गर्ने कुनै आशा हुँदैन।
एक वा दुई व्यक्तिलाई सम्पूर्ण ब्रान्डको मार्केटिंग अभियानको व्यक्तित्व परिभाषित गर्न साहस चाहिन्छ। त्यहाँ कम्पनीहरूले यो गर्ने एक कारण छ, र त्यो कारण यसले काम गर्दछ। अवश्य पनि, सुरुमा मार्केटिंग प्रतिलिपिमा नजर राख्नु राम्रो हुन्छ। यो कुनै कडाइका साथ कट्टरपन्थी विचार होईन, यो सम्भव भएसम्म "ह्यान्ड्स अफ" दृष्टिकोणलाई मनपराउन केवल एक अनुस्मारक हो।
सुझाव #:: रूपान्तरणमा फोकस गर्नुहोस्
मनपर्नेहरू र विचारहरू महान छन्, तर एक व्यापार केवल लोकप्रिय भएको मात्र बाँच्न सक्दैन। उनीहरूले नयाँ सम्भावनाहरूलाई भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूमा कसरी परिवर्तित गर्छन् भन्ने आधारमा मार्केटिंग सामग्रीको सफलताको मापन गर्नुहोस्।
प्रयोग र अन्वेषण गर्ने इच्छाको साथ सुरू गर्नुहोस्। जस्तो टिप # २ ले भने, कसैको व्यक्तित्व लेखको प्रारम्भिक टोन लेख्न दिनुहोस्। समय बित्दै जाँदा र विश्लेषण गर्न पर्याप्त डेटा भएपछि यो समय आंकडा get्कन प्राप्त गर्ने र विशेष कार्यहरू पत्ता लगाउने समय हो जुन व्यवसायले रूपान्तरण सुधार गर्न सक्दछ। अन्तमा, यदि अभियानले भुक्तान गर्ने ग्राहकहरुमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त व्यक्तिहरू प्राप्त गर्दछ भने, यसले कार्य गर्दछ। कथाको अन्त्य।
सुझाव #:: प्रश्नहरू सोध्नुहोस्
आजका मानिसहरू कुराकानीमा समावेश हुने आशा गर्दछन्। जब एक ब्रान्डले तिनीहरूलाई के गर्ने भनेर बताएर मार्केट गर्‍यो, तिनीहरू रिसाउछन्। अधिकारको आवाज लिनुको सट्टा सम्भावित ग्राहकहरूलाई बराबरको रूपमा बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। उनीहरूको रायको बारेमा सोध्नुहोस्। "हाम्रो सोडा सबै भन्दा राम्रो हो र तपाई यसलाई राम्रोसँग विश्वास गर्नुहुन्छ!" भन्दा तपाईले हाम्रो अद्भुत नयाँ सोडाको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
प्रश्न सोध्नु सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्छ। तपाईंको ब्रान्डको फ्यानबेस यसको लागि प्रयोग नगर्न सक्छ, र तिनीहरूले प्रतिक्रिया दिन सुरु गर्नु अघि यसले केही प्रयास लिन्छ। याद गर्नुहोस् कि कसैले पनि जवाफ दिईरहेका प्रश्नहरू याद गर्दैन, तिनीहरूले केवल कुराकानीहरू देख्दछन् जुन सफल प्रयासहरूबाट आउँदछ।
सुझाव #:: एकचोटि उनीहरूले जवाफ दिएमा, कुरा गरिरहनुहोस्!
यो प्रश्न सोध्न र हिंड्नको लागि पर्याप्त छैन। यद्यपि यो उही व्यक्ति होईन जो मार्केटिंग प्रतिलिपि लेख्दछ, कसैलाई सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा नजर राख्नु पर्छ र टिप्पणी गर्ने सबैलाई जवाफ दिन।
यो हल्लाले भरिएको संसार हो, र सबैलाई स्वीकार गर्न चाहन्छ। ब्रान्ड खाताबाट "धन्यबाद" जत्तिकै सजिलो केहि चीज फ्यान ट्युनिंग वा ट्युनि tun तरिकामा तपाईंको उत्पादन खरिद गर्नका बीच भिन्नता हुन सक्छ।
मार्केटिंग सामग्री लेखन एक दीर्घ-अवधि प्रक्रिया हो जुन प्रत्येक ब्रान्डको लागि फरक हुन्छ। आफ्नो ग्राहकहरु सुन्नुहोस्। प्रासंगिक सामग्रीको साथ तिनीहरूमा पुग्नुहोस्, र एक व्यक्तिलाई तपाईंको ब्रान्डको मार्केटिंग छवि परिभाषित गर्न दिनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि जे भए पनि, असफल विज्ञापनहरू प्राय: ध्यान नलगाईकन फेर्नेछ, त्यसैले केही बोल्ड विचारहरू प्रयोग गर्न नडराउनुहोस्। अन्तमा, एक ब्रान्डले यसको मार्केटिंग प्रतिलिपि प्रयोग गर्नुपर्दछ सम्भावित ग्राहकहरूसँग जडान गर्न र तिनीहरूलाई परिवारका सदस्यहरूमा परिणत गर्न।
टैग: रूपान्तरणCopywritingcopywriting सुझावहरूमार्केटिंग सामग्री सल्लाहहरूबजार प्रतिलिपिमार्केटिंग प्रतिलिपि सल्लाहप्रश्नलेखनलेखन सुझावहरू
ग्राहम रान्ड केवल टेक्नोलोजीको बारेमा जोशिलो छैन, तर एक उत्साहित लेखक पनि। ऊ सँधै वेबमा परिवर्तनहरू निगरानी गर्दै छ र सबै नयाँसँग अपडेट रहन कोसिस गर्दछ। राम्रो उदाहरण उसको हो लगइन गाईडहरू वेबसाइट जहाँ उसले विभिन्न कम्पनीमा नयाँ कर्मचारीहरूका लागि ट्यूटोरियल प्रस्तुत गर्दछ।